ब्युटी युवतीले बाटोमै कन्डम मागेपछि...(हेर्नुहोस भिडियो) - Nepali Virals
६ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०९:१८	7,683 पटक-पढिएको
कन्डम, परिवार नियोजनको अस्थायी साधन। धेरै विश्वासिलो र सुरक्षित हुने भएकाले यसको प्रयोग विश्वका अरु भागमा जस्तै नेपालमा पनि धेरैले गर्दछन्। त्यसो त यौन रोगबाट दोहोरो सुरक्षाका लागि पनि कण्डम अति नै सुरक्षित र भरपर्दो माध्यम हो। तर नेपाली समाज पश्चिमाहरु जस्तो सानै उमेरमा र जो सँग पनि यौन सम्पर्क गर्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई सामान्य मान्ने समाज होइन। आदर्श, नैतिकता र सामाजिक मूल्यका कारण नेपालमा यौन एउटा प्रेम, समर्पण र आत्मिक सम्बन्धका रुपमा रहेको छ। तर पछिल्लो समयमा पश्चिमा समाजसँगको साक्षात्कार र चलचित्रहरुको अनियन्त्रिक प्रवेशका कारण नेपाली युवाहरु यौनका मामलामा दिग्भ्रमित भइरहेका छन्। जसले गर्दा यौनलाई रमाइलोको माध्यम र महिलालाई यौन सन्तुष्टिको साधनका रुपमा लिने साथै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा होमिने क्रम बढिरहेको छ।
कन्डमको सही प्रयोग र परिवार नियोजन अहिलेको आवश्यकता हो। सँगै कन्डम मार्फत यौनरोग तथा अनिन्छित गर्भ रोक्न समाजमा यस’boutमा चेतना बढाउनु समेत आवश्यक छ।
कन्डमको सही प्रयोग गर्ने हो भने गर्भपतन जस्तो ज्यान मार्ने खालको अपराध नै गर्न पर्दैन त्यसैले केही युवाहरुले नेपाली आम मानिसको कन्डम ’boutको धारणा बुझ्नका लागि यो भिडियो बनाएका छन्।
सडकमा हिडिरहँदा एउटी स्मार्ट सुन्दर युवतीले कन्डम मागिन भने तपाई के गर्नु हुन्छ ? अझ कन्डम किनी देउ भनेर जबर्जस्ती गरि भने तपाई के गर्नु हुन्छ ? लाजले भुतुक्कै भएर कुरा गर्नु हुन्छ ? सँगै गएर किन्नु हुन्छ ? अथवा युवतीलाई लिएर कतै रिल्याक्स गर्ने प्लान बनाउनु हुन्छ ? अथवा उनको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेर भाग्नु हुन्छ ?
यो त तपाईको कुरा भयो तर यहाँ एउटी युवतीले बीच बाटोमै कन्डम माग्दै हिडेपछि युवायुवतीहरु अचम्मित परे । उनीहरुले बिभिन्न प्रतिक्रिया र हाउभाउ प्रस्तुत गरे । बास्तवमा ति युवतीले युवायुवतीहरुको मनशाय बुझ्ने कोसिस गरेकी थिईन । हेर्नुहोस् कन्डम प्रति नेपाली युवायुवतीहरुको सोच र ब्यबहार कस्तो रहेछ त ?
अघिल्लो आयो विश्वकै सस्तो स्मार्टफोन, अपत्यारिलो फिचर
पछिल्लो तनाव भगाउने ३५ फोटो जसले पेट मिचिमिची हँसाउछ